Video: Ashin Eiddidpala's No 1 Success & Sociology Center | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Ashin Eiddidpala's No 1 Success & Sociology Center
No.1 စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ သင်တန်းတွေပေးနေတဲ့ ဦးဇင်း အရှင် Eiddidpala ပါ။ ဦးဇင်းက သူ့ရဲ့ (၁၀) ရက်သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးတာနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသင်တန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်နက်ပေါ်မှာ လူပြောများလာတာကြောင့် ... ကဲ ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ..
EthihadJanuary 13, 2011 at 3:40 PMWhat are they doing ? Is it de-toxify? Oh! GOD, so strange....ReplyDeleteMaungJanuary 13, 2011 at 4:07 PMTaing ta par ko ahtin ma gyi poe so peee, teach tot lae , Chinese and English songs nae naw....Yeee ya dae har..Myanmar mar bar tway pyit kon pee lae ?ReplyDeleteidealJanuary 13, 2011 at 4:14 PMဘုရားသားတော် တစ်ပါးအနေဖြင်.ကြည်.ပါက လုံးဝမသင်.တော်ပါကြောင်းးးးးReplyDeleteKyawJanuary 13, 2011 at 4:32 PMdamn..this is so lame.. this background song is "asking you to take off your clothes"..how can they use such as dirty songReplyDeleteHenery Bo BoJanuary 13, 2011 at 4:49 PMwhat the hell he doing like this?He should maintain our dignity of our monkReplyDeletenanzinJanuary 13, 2011 at 4:53 PMIt is very inappropriate foraMONK of BUDDHISM guiding the Audiences to have modern dances with hippi lyrics. The Monk supposed to teach DARMA instead. It is very shameful act for the Dignity of Buddhism. I understand that dancing could uplift the spirits of people. But, MONKS have no business with dances. Dancing is Law-Ki works. MONKS should only focus on Law-Kote-Taya which is the main guidline of BUDDHA.ReplyDeletestanleyJanuary 13, 2011 at 5:41 PMit is so stupid.what kind of people dancing around . it is all people are really stupidReplyDeleteangelJanuary 13, 2011 at 6:04 PMthis is justatrick of government ,be careful all !!!ReplyDeletemamapyogyiJanuary 13, 2011 at 6:09 PMသာသနာကို တကယ် စနစ်တကျ ဖျက်စီးနေပါလား...ဂီတနဲ. ဘုန်ုးကီးကူပဒါးတလမ်း သံတလမ်းပါ...ဒါမှ ဘုန်ုးကီးအတု အယောင်ဘဲ...ဘုန်ုးကီးကျင်.၀တ် ၀ိနည်းတွေ ဘယ်ရောက် သွား သလဲ...ဘုန်ုးကီးတွေကို တမင် အူကည်ညို လျော. အောင်လုပ်နေတယ် လို.ထင်တယ်...လူတွေကိုလဲ အရူးလုပ်နေတယ်လို.ူမင်တယ်.. . လိုက်လုပ်တဲ.လူတွေကလဲ..စဉ်းစာူးပီး လုပ်ုကတာ မဟုတ်ဘူး...ဘာလိုဘဲုကည်.ုကည်. ကောင်းကွက် တခုမှ မတွေ.ဘူး...စိတ်ဓါတ်ူမင်.တင်နေတာလို.သာ အသူံကားကောင်းအောင်ေူပာတာ... အမှန်တော. လူထုကို မလေးစား..သာသနာကို မရိုသေ... ဘုန်ုးကီးအစစ်အမှန်တွေကို သိက်ခါချတဲ. ပွဲလို.ဘဲူမင်တယ်...ဒါမျိူးတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေလို.ကတော... ဗမာူပည်သည် ဘယ်တော.မှ. ဆင်းရဲတွင်း လွတ်လမ်းမရှိတော.ပါ... သာသနာ ဖျက်တို.ေူကာင်.သာသနာလဲပျက်..လူမျိူးစိတ်ဓါတ်အားလုံူးပုန်းတီး ပျက်စီးနေရတာ ကို လက်ပိုက်ုကည်.နေရုံမှ တပါး ဘာမှ မတတ်နိုင် ပါလားနောင်ဘ၀ဆက်တိုင်းမှာ ...ယခုဘ၀တွင် တွေ.ရှိခဲ.ရသော မင်းဆိုးမင်းညစ်.. သာသနာဖျက် အတုအယောင် များ နဲ. ဘ၀ဆက်တိုင်း ကင်းဝေးရပါလို ဧ။်..လို.သာ ဆုတောင်းနေရမှာပါလားReplyDeleteSaiJanuary 13, 2011 at 6:23 PMမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က..ဒေ၀ဒတ်နဲ့သူ့နောက်လိုက်တပည့်တွေလို့ပဲမြင်ပါတယ်..ရွံမိပါတယ်..ထွီ..ReplyDeleteonepairflightJanuary 13, 2011 at 6:33 PMဘုန်းကြီးတဲ့ဗျာ ၀ိနည်းနားမလည်ဘဲ ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလို ဘုန်းကြီးတွေသာများနေရင် သာသနာကွယ်ရော့မယ်။ လူကြီးတွေကလည်း မြန်မာ ပြည်သာသနာပျက်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ထေရ၀ါဒ နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက် ။ ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကို သာသနာတော်အကြီးအကဲများ ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ReplyDeletethikJanuary 13, 2011 at 6:50 PMဒီကိုယ်တော်ဟာ အာဏာရှိအသိူင်းအ၀ိုင်းကအသုံးချခံဖြစ်တယ်လို့ မထင်ပါ။အစကတည်းက အတုယောင်ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ဒီလို နိုင်ငံရေးမပါချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ လူစုဝေးစေမှုမျိုးကအဆန်းမှမဟုတ်တော့ တာ။အရင်ကလုမှုရေးသက်သက်ပါလို့ အော်ဟစ်လာခဲ့ တဲ့ ကြံ့ ဖွံ့ခုဘာလုပ်နေလဲ၊ videoကိုကြည့် ရတာ ၀န်ထမ်းအများစုပါတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ဆင်တူတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပိတ်သားပြောင်းဆွဲတာပါဘဲ။မြန်မာပြည်တွင်းရှိအရပ်သူအရပ်သားများအရှည်ကိုမျှော်တွေးကြပါရင်ငါးစာနောက်က ငါးမျှားချိတ်ကိုမြင်မှာပါ။မြင်နိုင်ကြပါစေ။နိုင်ခံဝန်ထမ်းများ ကြာကြာဝါးမယ့် သွား အရိုးကြည့် ရှောင်ကြပါ။videoထဲမှာ ဘယ်သူတွေဘာအားပေးတယ်လို့ ကြားတယ်မဟုတ်လား။ဘာဘဲ လုပ်လုပ်နောက်ကွယ်က ဘာတွေရှိနေလဲ ကြည့် ကြပါ။စိတ်ဓါတ်မြှင့် ချင်ရင် ကိုယ်အိမ်မှာဘဲ လောကနီတိဖတ် ကြပါ။အနီးဆုံးရောက်လာတဲ့ ရန်သူ(ဖိနှိပ်မယ့် သူ)ကိုကွမ်းမကမ်းမိကြပါစေနဲ့ ။ထိုင်မ ကန်တော့ မိကြပါစေနဲ့ ။ReplyDeletedareJanuary 13, 2011 at 6:57 PMReally Stupid people...how come myanmar people like this? Never think about what r they doing for...!!ReplyDeletedaJanuary 13, 2011 at 7:15 PMnothing for life.just wasteatimeReplyDeletevery good songJanuary 13, 2011 at 7:45 PMHe is notamonk, some government agent to dedignify real monks. He got the permission from gov. to rent that kind of big hall, have that large stupid crowd and did that in broad day light. The gov. want more people to go to hell with them.ReplyDeletemossespittJanuary 13, 2011 at 7:51 PMကောသလ မင်းကြီးရဲ့ နိမိတ်ဆိုးတွေ( အိပ်မက် ၁၆ ချက် ) ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတာချည်းပါပဲ ကောသလမင်းကြီး ရေ ဘာလို့များ ကောင်းတဲ့ အတိတ် နိမိတ်တွေ မမြင်မက်ခဲ့ရတာလဲ ကောသလမင်းမကောင်းလို့ပဲလား သေသွားတဲ့သူကိုပဲ မကောင်းဘူး ပြောရဲပါတယ် အခုရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့မပြောရဲပေါင်ပဉ္ဖင်းတက်လို့ သိမ်ဝင်တဲ့အခါ မေးတဲ့အထဲမှာ ယောက်ကျားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါတယ် လို့ဝန်ခံ ရတယ်မဟုတ်လား ဘယ်က ဘယ်လို ဘာတွေ ဖြစ်လာတာလဲ စစ်တပ်ထဲကိုရိက္ခသွားပို့ပြီး စစ်တပ်ထဲက သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းလိုင်စင်ရ သင်္ကန်းဝတ် နဲ့.............ဘာလို့ပြောရမယ်မှန်း မသိတော့ပါဘူးReplyDeleteAyeJanuary 13, 2011 at 8:03 PMwhat the hell is going on. Really not match with the monk.That none of his business,suppose to be he focus by Budda law and order.Becareful people that isn't real life not even our custom.ReplyDeleteသက်အောင်January 13, 2011 at 8:21 PMthats totally fuck up !!ReplyDeletecupidJanuary 13, 2011 at 8:38 PMsuchashame event! likeanight club in the monastery.real monk never use suchaword "phone phone"suchashame event. and really feel sorry for our religion!if he is only guy, let that happen ! but in this case, he wear likeamonk! whata?????ReplyDeletecephasJanuary 13, 2011 at 9:09 PM@ Maung:Myanmar hmar dayclub tway ko Monk tway kodai pyuk loh kyin pa nay par pi...ReplyDeletezayarJanuary 13, 2011 at 9:34 PMSAUT YU MYARReplyDeletezayarJanuary 13, 2011 at 9:38 PMTAKE OUT HIS UNIFORM,I VERY SHY FOR MY BUDDHIST RELIGION,WHAT THEY ARE DOING?SHIT BRAIN GROUP..ReplyDeleteSai myo minJanuary 13, 2011 at 9:42 PMစောက်ပေါတွေပဲ ကွ။ ဒါလားကွဘုန်းကြီး ။ ၁၀ပါးသီလကိုရောသိရဲ့ လား။ ဗမာအဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေကရော ဘာကြောင်တာလဲ။ မရှက်ကြဘူးလား.။ အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုရိုက်ထုတ်ပြစ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာတခုလုံးကိုစော်ကားတာပဲ။ ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီလောက်လေးတောင်မသိဘူးလား။ သူအဲ့ဒီလောက်ကစေချင်ရင် ဇင်ဗုဒ္ဒဘာသာကိုပဲပြောင်းလိုက်။ ထေရ၀ါဒမှာသူနဲ့တန်တဲ့နေရာမရှိဘူး။ မကြေနပ်တဲ့လူရှိရင် အောင်သူကို တိုက်ရိုက်လာဆဲလို့ရတယ်။ thunatural@gmail.com ကိုလာပြောကြ။ReplyDeletechitJanuary 13, 2011 at 9:43 PMI think they are lie another country. because do you remember?befor they are killed lot monks .Some country asked myanmar government. Why are you killed monks?Monk is important for myanmar people and you said some country.Now Myanmar Government have new india .they make new monks but not reallymonks and they are tell new monks your are go to dance and fuck women and drinking and fight the soldier. Now they are can show another country .Monks is bad for people thats right i'm killed monks myanmar government say and show another country .ReplyDeletechitJanuary 13, 2011 at 9:44 PMဗမာပြည်မှာလဲတရုပ်လိုးမသားတွေပဲဖြစ်ကုန်ပြီ..........ဘုန်းကြီးကလဲကုလားဘုန်းကြီး .....ဘုန်းကြီးအတုကြီး....ဘာသာရေးကိုဖျက်စီးနေကြတာ........မအေးလိုးသန်းရွှေလုပ်ခိုင်းတာနေမှာ ပေါ့ReplyDeletechitJanuary 13, 2011 at 10:21 PMWho love myanmar country don't angry this about the movie. we are thin liker not problems all people know about myanmar government .ReplyDeletechitJanuary 13, 2011 at 10:24 PMchit you aer rightReplyDeleterudolphJanuary 13, 2011 at 10:53 PMA yee gyi khit yauk pyee lar??ReplyDeleteni niJanuary 13, 2011 at 10:56 PMအဲဒီဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ သူရဲ့ ရုပ်ကိုကြည့်ရတာ ပြီတီတီကလီတီတီနဲ့ အသံကလည်း ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ..တကယ့်သာသနာဖျက်ဘဲ..အောက်ကလိုက်ကတဲ့သူတွေကလည်း..အရှက်တရားမဲ့နေတဲ့သူတွေချည်းဘဲ..ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘာသာတရားဟာ ဘာလည်းဆိုတာရော..အဲဒီသာသနာဖျက်တွေသိရောသိကြရဲ့လားမသိဘူး..အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ..ဗုဒ္ဓနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို စော်ကားတဲ့လုပ်ရပ်ဘဲ..သေရင်ဒယ်အိုးသွားမယ့်ဟာတွေ..ReplyDeletesnoopyboyJanuary 13, 2011 at 11:18 PMAcid သီချင်းကိုသတိရမိတယ် ဘာတဲ့......ဦးနှောက်မှ မရှိတာကိုး...ReplyDeletemglayJanuary 14, 2011 at 12:53 AMဘယ်လိုဝေဖန်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး....ReplyDeletedanyarJanuary 14, 2011 at 2:24 AMတော်တော်ကိုပျက်စီးနေပြီပဲမြန်မာပြည်ကြီးက....ReplyDeletemrJanuary 14, 2011 at 2:27 AMသွားပီး.............ReplyDeleteမောင်ရစ်January 14, 2011 at 3:08 AMမဟာသံဃာ့ နာယက အဖွဲ့က ဘာလုပ်နေတာလဲဟ။ ဒီလို ဘုန်းကြီးမျိုး အရေးမယူဘူးလား။ReplyDeletevipJanuary 14, 2011 at 3:24 AMha........day club open light p lar ;)ReplyDeleteko zayJanuary 14, 2011 at 3:55 AMဘုန်းကြီးရူး နဲ့ လှေလူးဆိုတာ ဒါပဲ..ရွံစရာကောင်းလိုက်တာ အော့အော့ReplyDeleteko zayJanuary 14, 2011 at 3:56 AMသာသနာ့အရေခြုံပြီး သာသနာကိုမျက်နှာပျက်အောင် လုပ်တဲ့ကတုံးစုတ် ကတုံးနာReplyDeleteko zayJanuary 14, 2011 at 3:56 AMဒီဘုန်းကြီးကို သံဃာတော်နဲ့ ဒါယကာများ အဆက်အဆံမလုပ်ပဲ သပိတ်မှောက်ကြပါReplyDeleteko zayJanuary 14, 2011 at 3:58 AMဂျောက်ဂျက်တောင် ငိုလောက်ပါတယ် ကိုကတုံးရယ်ဟစ်ဟော့လောကကြီးကိုတော့ ဒီဂျေဖိုးကတုန်းဆိုပြီး မသိမ်းလိုက်ပါနဲ့ဦးReplyDeletezayarJanuary 14, 2011 at 4:40 AMha ha so funny !!! never seen before !!! dar myo lar ma thi buu ta yar club so tar ,,,ReplyDeletemr.January 14, 2011 at 4:43 AMကြည့်ရတာကြက်သီးတောင်ထတယ်။ဒါဘုန်းကြီးအလုပ်မဟုတ်ဘူး။သင်္ကန်းကိုအရေခြုံပြီးတော့မလုပ်သင်ဘူး။သိပ်လုပ်ချင်ရင်သင်္ကန်းချွတ်လိုက်။ReplyDeleteNin LinnJanuary 14, 2011 at 4:51 AMhe is notamonk.very stupid dog.i want to say to fucker than shwe stop to do like this stupid action.ok?ReplyDeletekyawJanuary 14, 2011 at 4:53 AMoh...ant aww sa yar pay...dar Monk lar? Dee Kg ka kalar Muslin nat tu tal...Monk twe ko Dance pie top tayar pya ya mal loe bay tayar mar shi lay?..Dr ka Buddhist twe ko saw kar tar pay...Bay thu khine loe pay loke loke ..like loke that lu twe ka Brain Less twe thin tal...aye dee lo thu myar khine tine thar like loke nay yin top.. Myanmar lay dee that soe lar lie mal... Buddhist thar tha nar lay World ka pyaw sa yar phyit lar lie mal...Like loke nay that kg twe ka lay ....Thu myar ka Chee sar so yin sar mat lu twe thin tal.. thu myar ka khine tine like loke nay ya tal...taw taw pin tar pay.ReplyDeletekyawJanuary 14, 2011 at 5:01 AMaye dee kg ko pyaw ya mal..thu myar site tat ko ah yin ma tin khin ..ko har ko ah yin tin par loe... site tat myite tin yae thin tan...ha ha..yee sa yar tg kg the tal... ko site ko ko pyu pyin ma ya tar...thu myar pyaw tar ko time twe waste khan pie thaw that ya tal loe... Damakathika twe yat Tayar twe paw ma paw... Cd buy pie home mar nar loe ya tal... dee kg yu pya ter ko ah hote thin pie thaw kya tar ...yuu nay loe nay mal...Night Club loe Sex clothes twe wat pie ma that khine tar kan kg tal mat... Night Club lar mat ya tal...sout shat ma shi kya buu... nyout so ko lone tee nat ta yar pya ma lar ma thi buu....Attan... kyan naw yae tar real Monk twe.. nat Lu gyi lu kg myar ko ma yee nyan par... tike sine muu shi yin kyan taw ko nar lay pay par...khan pyin lwan loe par....ReplyDeletekyawJanuary 14, 2011 at 5:07 AMMyanmar pyi yat thatanar taw ko phyat see nay tar ko see ya tar ..daw tha htut tal pyaw ya ma lar...khan pyin tal pyaw ya ma lar.... taw taw soe that condition tha khu ko youk nay pi...Site that ko myint tin chin yin ...Myanmar monk twe haw that ta yar pwe twe ko thaw par..... dee ko thaw pie sex dance ma loke kya par nat...ReplyDeleteSaytanarJanuary 14, 2011 at 5:25 AMI am so sorry to be destroyed our Sasana. Actually this monk ought to go and work in KTV. Why stupid peoples follow to the way of this nasty - - lousy - - fake monk ? All the Juvenile Delinquents dancing in the hall and this bastard monk better should play FUCKING each other instead of insulting our Religion. All the peoples inside the hall are not worthy with my dick if they request to fuck them. I think even dogs on the pavement are not suitable for fucking with them. SHitReplyDeletephyoJanuary 14, 2011 at 5:28 AMတစ်ခုခုတော.လုပ်ရလိမ့်မယ်ဘားအံ့က သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ.အစည်းကို တိုင်သင်.တယ်ချက်ခြင်း ဖမ်းဆီးမေးမြန်းရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင် လိုက်ကတဲ.လူတွေကိုပါ ဖမ်းပြီးအဆုံးအမပေးရမယ်အရမ်းအရေးကြီးနေပြီ။ဒီလို ပွဲမျိုးကို ဇွဲကပင်ခန်းမ မှာတောင်လက်ခံကျင်းပခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော.အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီပြည်တွင်းကလူတွေ ဒီအမှောင်ကို ဖယ်ရှားပေးကြပါခင်ဗျား။ReplyDeleteaunglayJanuary 14, 2011 at 5:41 AMအသိဥာဏ်နဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်...တော်တော်ကို ရင်နာမိတယ်ReplyDeleteနေ့စွဲများJanuary 14, 2011 at 6:06 AMIf it is lead byaman orawoman I would gladly welcome this kind of Social Club. But now...I am very disappointed and even don't know what to say.ReplyDeleteShineJanuary 14, 2011 at 6:10 AMwhat the man !!!! ဘာလဲဟ ဘာ လဲ ဘာ လဲ လူတွေ (တောက်....)စောက် အသိစိတ် မရှိဘူးလား .... ရွံစရာကြီး .... ဘာလဲကွာ ငါ .... ဟူး သင်္ဃန်းရုံ ... အာ တော်ပီကွာ တော်တော် ညစ်တယ်ReplyDeleteashinJanuary 14, 2011 at 6:36 AMဘယ်လိုမှမသင့်တော်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ ဘာဖြစ်လို့အဲလိုလုပ်လဲဆိုိတာတွေးကြည့်လို့တောင်မရပါလား အဲကိုယ်တော်ကို ဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေရတာလား သာသနာညီုးနွမ်းမှူ့နဲ့ လူဝတ်လဲလိုက်ပါကျသင့်တဲ့ပစ်ဓါဏ်ချမှတ်ပါ တခြားဘုန်းကြီးတွေ နဲ့တော့မနိုင်းစေချင်ပါ..မေတ္တာဖြင့် အရှင်မုနိန္ဒ..သာသနတက္ကသိလဓမ္မာစရိယ B.A eng..M.A buddhism..ReplyDeleteoldJanuary 14, 2011 at 6:51 AMမအေလိုး ကုလားဘုန်းကြီး တရုပ် အကျင့်တွေကို မြန်မာတွေလာသင် ပေးနေတယ်ဘယ်သူကမှ မတားမြစ်ကြဘူးလား.ReplyDeletewee (Sulley)January 14, 2011 at 7:05 AMwhat the hell are they doing!! look!! they're wearing coats, neckties, skirts, shoes and listen whatabullshit man, talking about.. gosh damn it!ReplyDeleteeverJanuary 14, 2011 at 7:10 AMဘယ်ကစောက်ရူးတွေလဲ....စောက်ကျက်သရေမရှိတဲ့ ကုလားဘုန်းကြီးလုပ်ခိုင်းတာကို ဦးနှောက်မရှိတဲ့ စောက်ရူးတွေကလိုက်လုပ်ကျတယ်..သာသနာကို ဖျက်နေတဲ့ ကုလားဘုန်းကြီး လီးပဲကွာ....ReplyDeleteNaYmInJanuary 14, 2011 at 7:33 AMvery disappointed watching this video.what are they doing? doing exercise or something? what is this monk ? i think U Kyaw Hein is more better than this monkReplyDeletesan sanJanuary 14, 2011 at 7:36 AMbudda god help us burnese people bayar. i think this is not real monk. i am so sd about that.ReplyDeleteoxygenJanuary 14, 2011 at 7:48 AMထစ်ခနဲ့ ရှိ သန်းရွှေ ကို ထိုင်ဆဲ နေယုံ အစိုးရ ကိုထိုင်ဆဲ နေရုံ စစ်တပ်ကို ထိုင်ဆဲ နေရုံ နဲ့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး.... လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် တာကို လုပ်နိုင်အောင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်း အ၀ိုင်းမှာ အဖြစ်မခံရအောင် သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာန တွေထိ ပေါက်အောင် သာသနာပိုင် အာဏာရှိ ဘုန်းတော်ကြီး တွေထိ ရောက်အောင် သတင်းဖြန့်ဝေပေးရင် .... အမြန်ဆုံးအရေး ယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့.......................ReplyDeleteBaby rapperJanuary 14, 2011 at 8:13 AMI personally think, this is really stupid especially who brought that idea to become like this, whatashame in my country. Look at those ppl dancing, come on u all are older than me, u all may have much more experience than i do. But i dont understand , can't anyone think this is really stupid to do infront ofamonk? and the monk enjoy watching people dancing? please သစ္စာလေးပါး တရား ဟောကြားတော် မူပါ ဘုရား ၁၀ရက် တရားစခန်းပွဲ ကျင်းပလိုက်ပါဘုရားReplyDeletezawJanuary 14, 2011 at 8:28 AMအပျော်တွေ လျှောက်လုပ် လို့ တဒင်္ဂ ပျော်တာ မှန်ပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရာအမှန် နိဗ္ဗာန် ရောက်မှာမှမဟတ်တာလူတိုင်း အပျော်လုပ်တတ်ကြပါတယ် Night Club တွေ Stage Show တွေကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင် ဘယ်သူမှ သင်ပေးစရာမလိုပဲ သွားတတ်ကြတာပဲသံဃာတွေ ရဲ့တာဝန်က မေ့မေ့လျှော့လျှော့ ပျော်နေတတ်တဲ့ လူတွေကို တရားပြ သတိလေးပေးပြီး တရားအလုပ်လုပ်တတ်အောင် သွန်သင်ညွှန်ပြပေးဖို့ ပါ။အခုလို ရူးကြ မြူးကြ ပျော်ကြဟေ့ ဒါမှ မအိုမှာ လို့ လမ်းညွှန်နေတာကတော့ သံဃာအစစ်တွေ မလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။ဘာသာခြားတွေ တွေ့ ရင် ကဲ့ရိကြမှာအမှန်ပဲ။ သံဃ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေရေ ဘာလုပ်နေကြလဲ ဘုရာ့။ ဘွဲ့ တွေ ဖုံးတွေ ကားတွေ ကျောင်းတိုက်တွေကြား ယစ်မူး ပြီး ဘာမှ မမြင် မကြားတော့ဘူးလား ဘုရာ့။စိတ်လေတယ်။ တိုင်းတပါး အထင်မကြီး အောင်..တဲ့ စင်ပေါ်က ဟာတွေ ဝတ်ထားတာတွေက တိုင်းတပါး ဝတ်စုံ မဟုတ်လို့သူတို့ ပထွေး ဝတ်စုံလား...Projector မှာ ပြထားတဲ့ သတ္တဝါတွေက တိုင်းတပါး က သတ္တဝါ မဟုတ်လို့သူတို့ ပထွေး တွေလား။တရုတ် ကို တိုင်းတပါးလို့မသတ်မှတ်ပဲ သူတို့ ပထွေး တိုင်းပြည် လို့သဘောထားနေကြသလားပဲ။ReplyDeletesingJanuary 14, 2011 at 8:30 AMတပ်က တပ်မမှူးတောင် လာကနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ဖိအားပေးမှုကြောင့်လဲ ဆိုတာ တော်တော်ရှင်းနေပါတယ်...ဒီလိုလူမျိုးတွေ ကြောက်တတ်တာ သူတို့ အဘတွေပဲဆိုတာ...သိနိုင်ပါတယ်သံဃနာယက အဖွဲ့ ကတော့ အစကတည်းက အစိုးရက ထိုင်ဆိုထိုင်..ထဆိုထတဲ့ အဖွဲ့ မို့ ဘာမှ ပြောလို့ မရပါခင်ဗျား....ReplyDeleteGlonJanuary 14, 2011 at 9:11 AMA bay: pyaw tar ne'. lote nay kya tar ka ta charr!ReplyDeletehtooJanuary 14, 2011 at 9:41 AM့ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက် အံ့အြမိတယ်။လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်တယ်...သူတို့ကိုသိပ်မကြာခင်မှာ မြေမြိုတော့မယ်။ညီကိုတွေစောင့်ကြည့်နေကြပါ။ကျွန်တော်တို့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။တန်ခိုးအရှိန်အ၀ါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော ဒေ၀ါသိကြားနတ်မင်း ဖန်တီးပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ReplyDeletered boyJanuary 14, 2011 at 9:57 AMအေးဗျာ။ ကြည့်ရတာ ကြောက်စရာကြီး။ReplyDeleteသားငယ်(ချယ်ရီမြေ)January 14, 2011 at 10:15 AMသင်တန်းဖွင့်တဲ့ ကိစ္စမှာ အားလုံးက တော်တော်လေးကို family type ဖြစ်နေကြတယ် အားလုံးလည်းပျော်နေကြတယ် ဒီနေရာမှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆရာတော်တစ်ပါးသာမဟုတ်ခဲ့ရင်တော်တော်လေး .............................ReplyDeletechamJanuary 14, 2011 at 10:22 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMaungJanuary 14, 2011 at 10:47 AMThis isacomplete disgrace and disgust to our culture and religion of thousands of years. He isafake monk beyond doubt. I'm sure he knows nothing about Buddha's teachings. I urge government and religious authorities takeadecisive action swiftly. This is clearly against Sila and Wi-nee. This is the monk who should be disrobed, not the ones spoken out for people. Where the hell is the government now???ReplyDeleteAungJanuary 14, 2011 at 10:51 AMlu twae ka laeayuu lo pae, Shout lote nay kya tal. A MharaMhan ko nae nae ma ma shinn sarr tat bu larReplyDeletekhineJanuary 14, 2011 at 10:58 AMROTFL hahahhahahahahahah dats so funny xDReplyDeletekaungkinJanuary 14, 2011 at 1:27 PMအော်။ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းလား။ club နဲ့မှားသွားလို့။ :PReplyDeletethuJanuary 14, 2011 at 5:12 PMI don't understand, What he doing??ReplyDeletemijadeJanuary 14, 2011 at 5:43 PMHello Guys, be positive. you know since this junta ruling country, I never see Burmese people are happy. Now they can release their stress by dancing. They dance freely. No one felt ashame. From this emotion, they will get confidence and their thoughts will drive to the good ways. I view it as good for the poor burmese people. But I dont know about the Monk and the songs.ReplyDeleteLwinJanuary 14, 2011 at 7:25 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteWiselyJanuary 14, 2011 at 9:32 PMShameful !!!!! Stupid ... Idiots follow what Stupids do.Make use of Monk's appearance and teach F**king things. wanna ask3only.WTF WTF WTFReplyDeleteNoel NayJanuary 14, 2011 at 9:38 PMIt cannt be monk totally...ReplyDeleteKhinJanuary 14, 2011 at 10:12 PMall of them are mad, not real monk,ReplyDeleteNay LinJanuary 14, 2011 at 10:40 PMပ၅နာ၅ကကင၉က၉က့ ညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညReplyDeleteNay LinJanuary 14, 2011 at 10:41 PMသာသနာကိုတော. မဖျက်စီးပါနဲReplyDeleteNay LinJanuary 14, 2011 at 10:43 PMစောက်ရူးဘုန်းကြီး ဘုန်းကြီးစောက်ရူး Go to hell.ReplyDeletewanJanuary 14, 2011 at 11:05 PMThe fact is most people in Myanmar(not all people) do not have true knowledge. Military government can still control these stupid people and country foralong period of time. I am pretty sure that we won't get freedom and democracy for upcoming years. Thumbs up, if u guys agree with me !ReplyDeletenyo winJanuary 15, 2011 at 3:26 AMအလကားပါ မြန်မာတွေကို သွေးခွဲတာပါအောက်က လိုက်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အနီရောင်ပတ်ထားတဲ့ကတုံးကို ကြည့်လေအနီရောင်ပတ်ပြီး ကတုံးတုံးလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးဖြစ်ရောလားReplyDeletenyo winJanuary 15, 2011 at 3:35 AMခင်ဗျားလို့ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဒါလားကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေ ဘယ်သူမှလာမတားနဲ့ ဒီလိုလား တစ်ခုခုအဆိုးဖြစ်လာရင် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်တာပါဆိုပဲ တော်တော်လေးစိတ်နာဖို့ကောင်းပါတယ်အားလုံးသိရမှာက ဘယ်လိုဘ၀မျိုးမှာပဲရောက်ရောက် လူလူချင်းတူပေမယ့် စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ရပ်တွေက ကွာခြားနေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းမမေ့ပါနဲ့ReplyDeleteBlackJanuary 15, 2011 at 3:39 AMvery uglyReplyDeleteSoeJanuary 15, 2011 at 4:19 AMWho the F***king is ruining our religion with the fake audience and the made up monk. Shame on you guys; this is very pathetic. I don't think he isareal monk nor the audience. The audiences are either hired by some authority oragroup of people who are hating on Buddhism, religion. Even though the unknown group is trying to poison the well of Buddhism, I am ashamed of you guys action. Come on Nigga, cut it off. No offense to any Buddhism, I myself isaBuddhist.ReplyDeleteSoeJanuary 15, 2011 at 4:54 AMကယ်သူငယ်ချင်းတို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီမကျေနက်ကျတာတော့ အမှန်ပဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်မဖြစ်သင့်ဘူး ကျွန်တော်တို့ အကောင်ထည်ဖော်ထားတာ တစ်ခုရှိတယ် ၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ခုနှစ် ဆန္ဒ ပြဖို့ ရှိတယ် သူငယ်ချင်းတို့ ကို အကူညီတောင်းချင်တာ က ပါဝင်ပေးကြပါ အခု လဲလူစုနေပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ လဲပါဝင်လူစုပေးကြပါ လို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါ၏။ ၈.၈.၁၉၈၈ မှာကမ္ဘာသွင်ခဲ့သလို့၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟူပြီနာမည် သွင်စေရမယ်ဟေ့ReplyDeleteyeseingyiJanuary 15, 2011 at 5:28 AMပြောမိရင်လည်း ငရဲ ကြီးဦးမယ် ....တောက်!!!!!ReplyDeleteဘေJanuary 15, 2011 at 5:33 AMall the people in this viedo stupidReplyDeleteRomanticJanuary 15, 2011 at 5:33 AMဘာပြောရမှန်း မသိအောင်ကို စိတ်ပျက်မိတာပါ။ သူတို့ ဘာတွေ သင်လို့ ဘာတွေ သင်ယူ တိုးတက်နေတယ် မသိပေမယ့်... ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပို့ချရမယ့် သင်တန်း မဟုတ်တာတော့ အတိအကျပါပဲ...မြန်မာ ဆိုတာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သာ သက်ဝင်ယုံကြည်တာပါ...ထေရဝါဒ ဘုန်းကြီး ဝိနည်း နဲ့ မလျော်ညီသော........ သင်တန်းပို့ချမှု ကို အားမပေးသင့်ပါဘူး.... အခြား လူမှုရေး သင်တန်းမျိုးဆို ကိစ္စ မရှိလေ... ဘုန်းကြီးနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နေရာ ထိုင်ခင်း လည်း မဟုတ်.....ReplyDeletezin marJanuary 15, 2011 at 7:02 AMWhataShame! They all against Buddha's teaching.I m worried to disappear Buddha's teaching.The people who involved that dance party has shameless and lack in brain.They are not Buddhism.They never think properly what is right and what is wrong.I believe that those people never know what is Buddha's teaching .All Brainless!!!You all are not Buddhist!!!!ReplyDeletetuntunJanuary 15, 2011 at 7:55 AMဒီလူကို မောင်းထုတ်ကြပါဗျို့ .......အခုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ကြပါ..............................ReplyDeleteNayzarJanuary 15, 2011 at 8:10 AMi think he gayReplyDeletecolumbusJanuary 15, 2011 at 11:19 AMIs he real monk ? I think other opposite religions.Because i was known that real monk ( son of BUDDHA )are never teach people like shameless things, they teach how to talk politely , how to walk politely , how to respect each other, etc....This case is need to take action for our religion.ReplyDeletePlatinum BirdJanuary 15, 2011 at 1:01 PMFAKE monk! and STUPID people!ReplyDeleteA-bombJanuary 15, 2011 at 6:05 PMဒီဘုန်းကြီးက ဘယ်လောက်ပဲသာသနာဖျက်နေပါစေ သူ့ကိုကုလားဘုန်းကြီးဟုမခေါ်သင့်ပါ။ သူ့နာမည်ကို ခေတ်မီအောင် အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတာလို့ မှန်းရပေမယ့် သူ့နာမည်က ဣဒ္ဓိပါလဖြစ်ပါတယ်။ ပါဠိနာမည်ပါ။ ပါဠိနာမည်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုသာ ကုလားဘုန်းကြီးဆိုပြီးနှိမ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘုရားလက်ထက်ကကော အခုခေတ်အထိ ကုလားလူမျိုး သံဃာတော်တွေကို စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ လက်ယာရံရဟန္ထာမထေရ်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ဖြင့် သူ့နာမည်ရဲ့မူရင်းအသံထွက်က စာရီ ပုထရာ(စာရီပုဏ္ဏားမ၏သား) လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မြန်မာတွေ လူမျိုးခွဲခြားတဲ့အကျင့် ဖျောက်သင့်ပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဗမာလူမျိုး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း။ReplyDeleteshweJanuary 15, 2011 at 11:30 PMNobody owns buddhism (Truth or nature). Nobody can not destry buddhism either. when you get angry, you destry the Buddha's teachings such as forgiveness,compassion,love, peace.ReplyDeletemgpwaJanuary 15, 2011 at 11:38 PMwhat's the hell?ReplyDeletezinJanuary 16, 2011 at 5:41 AMဗုဒ္ဒက ကုလားဆိုပေမယ့် ယုတ္ဌိ မရှိတဲ့ အလုပ်ပို တွေကို ဘာတခုမှ မလုပ်ခဲ့ ပါဘူးReplyDeletezinJanuary 16, 2011 at 7:28 AMThis monk is not true Buddhist monk.Kyant phoot monkwe can see easily. He is not true monkReplyDeletejulinJanuary 19, 2011 at 9:24 PMဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ။ အရှက်လဲမရှိကြဘူး။ ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်။ReplyDeleteNIN MAUNGJanuary 20, 2011 at 8:21 AMTHERE IS NO MORE TERAWADA BUT ONLY THAN SHWE WADA.BECAREFUL THEIR PROPAGANDA.ReplyDeleteကောင်းစေJanuary 21, 2011 at 9:32 PMအင်းတချိန် တိုင်းပြည်တခုမှာ ဘုန်းကြီးတွေဆီ သားဆုတောင်းကြတော့ အောင်ကြတယ်တဲ့။အင်း ၀ိနည်းထိန်းသိမ်းပြီး အပစ်တွေမြင်ကြလို့ပါ ဒါတွေကမ်းသွားရင်တော့ ၀ိုင်းကတဲ့ မာတုကာမတွေ ပိုပြီး ဒီထက် က ကြမှာပါ။ReplyDeleteFotoJanuary 23, 2011 at 5:23 AMI don't think it is improper for Buddhism. The most important thing is moral application. Myanmar Military Leaders are look like very religious or very traditional practiced, but their moral is extremely down.ReplyDeleteFotoJanuary 23, 2011 at 5:34 AMReligions should be modernized asatime, today, Myanmar Therawada Buddhism also was transformed from the original Nepali Buddhism.The most important thing is you should be transformed as spiritual way.ReplyDeletesiJanuary 26, 2011 at 7:12 PMတရားဓမ္မမှာ နူးညံ့သိမ့်မွေ့ တာပဲ ရှိပါတယ်...စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်...ReplyDeletenyeainFebruary 4, 2011 at 12:23 AMဒီသင်တန်းက မြန်မာနိုင်ငံလို ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ ဘုရားသားတော်တပါးအနေနဲ့ မလုပ်ဆောင်သင့်ဘူးလို့မြင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုရားသားတော်အစစ်အမှန်တွေကို ပြည်သူတွေရဲ့အရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရင် ဘယ်လိုဆက်ဆံခံရသလဲဆိုတာ ၂၀၀၇ တုန်းကမျက်မြင်ပါပဲ။ အခုဒီသင်တန်းကိုဝေဖန်နေကြတဲ့၊ ဒါဟာသာသနာတော်ကိုဖျက်နေတာပါလို့ အတိအလင်းပြောနေကြတဲ့၊ ကြံ့ဖွတ်ပါလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ ဒီသင်တန်းကို တက်ဖူးပါရဲ့လား။ သင်တန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် တက်တာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို သာသနာဖျက်နေတယ်လို့ ဂဃနဏ တပ်အပ် ပြောနိုင်အောင်၊ ဝေဖန်နိုင်အောင် တက်ကြည့်ပြီးကြပါပြီလားလို့ပြောချင်တာပါ။ ဒီသင်တန်းကို ဘာသာပေါင်းစုံလာတက်ကြပါတယ်။ ကလေးတန်းလဲရှိပါတယ်။ လူကြီးတန်းက ၁၈နှစ်က နေအထက်ပါ။ ကျွန်မတက်တဲ့ အပတ်စဉ်မှာ လူ ၄၀၀ နီးပါရှိပါတယ်။ ပြီးဆုံးတဲ့နေ့အထိ လူမလျော့သွားပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါ။ သင်တန်းမှာ ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ (သင်တန်းက ပို့ချပုံတွေကို ခရစ်ယာန် တွေအတွက်က ရင်းနှီးနေနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်သင်တန်းတွေမှာ ဒီလိုပဲ သင်ကြားကြလို့ပါ။) ပထမဆုံးရက်မှာမှ ပို့ချမဲ့သူဟာ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးမှန်းသိတာပါ။ ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတပါးမလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ သင်တန်းပုံစံမှန်း သိပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကမလုပ်ဆောင်သင့်ဘူးလို့ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အမြင် အနေအထားကကြည့်ရင်ပြောတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့ ဒီသင်တန်းကို ဘယ်သူပို့ချပို့ချ လက်ခံပါတယ်။) ဒီလိုသင်တန်းမျိူးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးမဟုတ်ပဲ တခြားသောဘာသာခြားတွေ ပို့ချလို့ လုံးဝမရနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တရားဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ သိသိသာသာလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘာသာရေးကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ရော၊ နိုင်ငံရေးပါလာမှာစိုးလို့ရောကြောင့်ထင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေ ဘာသာအတွင်း လူငယ်သင်တန်းပေးချင်ရင် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းရပါတယ်။ ဒါတောင်လူအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း မကျတော့တာ များပါတယ်။ တနင်းဂနွေ တရားဟောရင် စစ်တပ်ဖက်က လူလွတ်ပြီး လာနားထောင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဘာသာတရားတွေကိုထားပါလေ။ ဒီ သင်တန်းမျိုး လူပုဂ္ဂိုလ်ထဲက လုပ်မယ်ဆိုရင်ရော ရမယ်ထင်ပါသလား။ဒီသင်တန်းဟာ သင်ကြားပို့ချတဲ့သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတပါးဖြစ်နေတာကလွဲရင် လူတွေ အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတခုပါ။ ဆရာတော်ကလဲ ပြောပါတယ်။ တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်တွေ အများကြီးပါတဲ့။ ဒါကြောင့် သူကဒီသင်တန်းကိုလုပ်တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆရာတော်က အရင်က တောရဆောက်တည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နယ်လှည့်တရားဟောပါတယ်။ ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ တရားခွေတွေကြည့်ပြီး သိရတာပါ။ အစိုးရဘုန်းတော်ဘွဲ့ ဘာတခုမှမပါပါဘူး။ ဆွယ်တရား တခုမှမဟောပါဘူး။ ဘာသာရေးမပါ ပါဘူး။ လူစုတာလဲမပါ ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာသာခြားတွေအနေနဲ့ အကြည်ညိုပျက်စရာ တခုမှမ ပါပါ။ သင်တန်းသားတယောက် အနည်းဆုံးလူ ၅ ယောက်ကို ပြောရမယ်လို့ ဆိုတာက ဒီသင်တန်းကြောင်း ပြောပြခိုင်းတာပါ။ သင်တန်းရဲ့ ကြာချိန်က တနေ့ကို ၂ နာရီပါ။ ဒါပေမယ့် ၃ နာရီလောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၁၀ ရက်သင်တန်းပါ။ ဒီမှာပြထားတဲ့ video file က ၁၅ မိနစ်စာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ၊၀တ်စားဆင်ယင်ပုံနဲ့ ကောင်းမွန်သော စိတ်နေစိတ်ထား တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါတယ်။ သင်တန်းချိန်က ၃ နာရီနီးပါးကြာတဲ့အတွက် ၁၀ မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ ပါပါတယ်။ ၁၅ မိနစ် ငြိမ်သက်စွာ အလင်းရောင်လျော့၊ မျက်စိမှိတ်ထားပြီး ထိုင်နေရတာ ပါပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ကုန်ခါနီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ရပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့သူ စင်ပေါ်တက်ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်တန်းကို ဆိုးသည် ကောင်းသည်ပြောချင်ရင် ဒီ post မှာပါတဲ့ video လေးတွေလောက်ပဲ ကြည့်ပြီးပြောလို့ မရလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး တရက်စာအပြည့်လောက်တော့ ဘာတွေသင်လဲဆိုတာလောက်တော့ သိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါကလည်း ကျွန်မအမြင်ပါ။)သင်တန်းရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ သင်တန်းသားတွေထဲက အလုပ်လိုချင်တဲ့သူတွေ cv ပေးထားလို့ရပါတယ်။ လုပ်သားလိုနေတဲ့ သင်တန်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေ လိုတဲ့ပိုစ့် ပြောထားလို့ရပါတယ်။ လိုအပ်နေတာချင်းတိုက်ဆိုင်သွားရင် သင်တန်းက ဆက်စပ်ပေးပါတယ်။ အခမဲ့ပါ။ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေ ဝေလို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကလွဲရင် တခြားဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ သင်တန်းသားအချင်းချင်းမဆွယ်ကြရပါဘူး။ဒီသင်တန်းအပြင် ၃ ရက်တာ စီမံခန့်ခွဲမှူသင်တန်းလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒီသင်တန်းကိုတော့ ကျွန်မခရီးသွားရမှာမို့မတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီသင်တန်းအကြောင်းတော့ဘာမှမသိပါ။ဒါတွေကတော့ ကျွန်မသိသမျှ၊ တက်ခဲ့ရသမျှ(No. 1) သင်တန်းအကြောင်းပါ။ ဘယ်သူ့ဆီကမှ တဆင့်ကြားခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ သင်တန်းကြော်ငြာ ၀င်နေတာလဲ မဟုတ်ပါ။ ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ဒီမှာဝေဖန်ထားတာတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သိသမျှပြောပြတဲ့သဘောပါပဲ။ReplyDeleteAHauk LianFebruary 20, 2011 at 1:55 PMမnyeainပြောသွားတာ တော်တော်များများမှန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်..အကောင်းဆုံးကတော့ ၀ိနည်းနဲ့ ကိုက်မကိုက်ကြည့်ပါ..မကိုက်ဘူးဆိုရင် သာသနာသန့် ရှင်းရေး စည်းကမ်းနဲ့ အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်..သာမာန်လူတွေ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး..၀ိနည်းနဲ့ လည်းကိုက်တယ်ဆိုရင် စော်ကားမိတဲ့သူပဲ အပြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..ဗုဒ္ဒဘာသာ ဗမာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲ အယောင်ဆောင်ဘုန်းကြီးဟုတ်မဟုတ်လည်းတချက်ကြည့်ရပါမယ်..မြင်တာနဲ့ ကို မသတီစရာကောင်းပေမယ့် မဆဲကြပါနဲ့ ..အပြစ်ရှိတဲ့သူကို သူအပြစ်လုပ်တာပဲ ခဏခဏပြောနေခြင်းဟာ ကိုယ်လည်းအပြစ်တခုကို ကျူးလွန်လိုက်သလိုပါပဲ..မသင့်တော်ဘူးထင်ရင် သက်ဆိုင်ရာလူကြီး သို့ မဟုတ် ဆရာတော်ကြီးတွေထံ သတင်းပို့ သင့်ပါတယ်..တရားနည်းလမ်းကျကျ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားစေချင်ပါတယ်..ဗုဒ္ဒဘာသာဗမာလူမျိုးတွေဟာ တခြားဘာသာတွေအပေါ်မှာလည်း မစော်ကားမပုတ်ခတ်ပါဘူး..ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဘာသာကို ထိပါးလာရင်လည်း ကာကွယ်ရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်..ကျွန်တော်ကတော့ မွတ်စလင်တွေရဲ့ demographic ကိုပဲကြောက်မိပါတယ်..နူကလီးယား ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မလိုပါဘူးတဲ့..သူတို့ လူမျိုးတိုးပွားလာမှုနဲ့ အခြားဘာသာဝင်များနဲ့ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှုတို့ ကနေ ၂၀၅၀မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ မွတ်စလင် stateဖြစ်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်..သတိချပ်ကြပါ..သူတို့ ကိုလည်းမစော်ကားဘူး..မိမိတို့ ဘာသာကိုလည်း လာမစော်မိစေဖို့ စော်ကားလာရင်လည်း တရားသဖြင့်အနိုင်ယူကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်..ဘာသာဝင်အပေါင်း ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ..ReplyDeletecoconutJuly 17, 2011 at 2:22 PMkyi ya dar ta myo kyee bel . Htoo san like dar .ReplyDeleteAdd commentLoad more...